कति कमाउँछन् पोर्नस्टार? यी हुन् सबैभन्दा धनी - Kantipath.com
इन्टरनेटको दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै खोजिने वेवसाइटमा पर्छन् पोर्न साइट । पोर्न फिल्ममा देखिने महिला तथा पुरुषको आम्दानी कति हुन्छ ? यो धेरै मान्छेको चासोको विषय हो । विभिन्न अध्ययन अनुसार इन्टरनेमा भएका कुल विषयवस्तुको १२ प्रतिशत पोर्नोग्राफी सम्बन्धी सामाग्री छन् ।
मिडियम डटकमका अनुसार पोर्न उद्योगमा वार्षिक करिब १ सय विलियन अमेरीकी डलरको हाराहारीमा लगानी हुन्छ । विश्वभर एक सेकेण्डमा ३ हजार डलर बराबर पोर्न उद्योगमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।
अमेरिकालगायत पश्चिमी सभ्यता अभ्यास गर्ने धेरै देशमा पोर्न फिल्म सम्माननिय व्यवसाय हो । त्यसैले त्यहाँ यसको बजार पनि राम्रो छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो सिनेमा उद्योग हलिउडले वार्षिक ६ सय सिनेमा निर्माण गरेर १० विलियन नाफा कमाउँदा पोर्न उद्योगले भने १५ विलियन नाफा कमाउँछ ।
सन् २०१७ मा द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाले गरेको अध्ययन अनुसार पोर्न उद्योगमा काम गर्ने महिला कलाकारले पुरुषसँगको एक दृश्यका लागि ८ सय पाउण्ड स्टर्लिङ लिने गरेका छन् । यस्तै, महिला कलाकारले महिला कलाकारसँगको दृश्यका लागि ५ सय ५० पाउन्ड पारिश्रमिक पाउने गर्छन् ।
तर, अमेरिकामा भने पोर्न फिल्मका कलाकारले अन्य देशको तुलनामा धेरै पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अमेरीकामा महिला–महिलाको दृश्यका लागि ८ सय डलर पारिश्रमिक दिइन्छ । महिला–पुरुषबीचको दृश्यका लागी उनीहरुले १ हजार डलर पाउने गरेका छन् । त्यस्तै, गुद्धा मैथुनका लागि १ हजार २ सय डलरभन्दा बढी पारिश्रमिक दिने गरिएको तथ्यांक छ ।
पोर्न उद्योगमा भर्खरै प्रवेश गरेका पुरुषले एउटा दृश्यका लागि ५ सयदेखि ९ सय डलरसम्म पाउने गर्दछन् । तर, सुपरस्टार भइसकेका पुरुषले भने १ हजार ५ सय डलरभन्दा बढी आम्दानी पाउने गरेका छन् । यस्तै, एकभन्दा बढी पुरुषसँगको दृश्यका लागि महिला कलाकारलाई ४ हजार डलरभन्दा बढी पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।
यसका अलावा पोर्न फिल्मका निर्देशकले १ हजारदेखि ३ हजार डलरसम्म पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । पोर्न फिल्मका लेखकले २ सय ५० देखि ४ सय डलरसम्म आम्दानी गर्दा मेकअप आर्टिस्टले ५ सय डलर पारिश्रमिक पाउँछन् ।
यसैगरी, क्यामेरापर्सनले भने ५ सयदेखी ७ सय डलरसम्म आम्दानी गर्छन् । पोर्न सिनेमा बनाउने निर्माण कम्पनीले संसारभरबाट कलाकारको खोजी गर्ने गरेको छ ।
हलिउडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने पोर्न फिल्म उद्योगका कलाकालको सम्पत्ति चाहिँ कति होला ?
यी हुन् विश्वका धनी पोर्नस्टार
अमेरिकन पोर्न स्टार जेना जेमशनको कूल सम्पत्ति ३० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यो सबै सम्पत्ति उनले पोर्न फिल्ममा अभिनय गरेरै आम्दानी गरेकी हुन् । जेनाले अहिलेसम्म २ सयभन्दा बढी पोर्न फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् ।
टेरा प्याट्रीकले पनि पोर्न फिल्मबाटै १० मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गरेकी छिन् । १० देखि १५ वटामात्र पोर्न फिल्ममा काम गरेकी प्याट्रीकले सन् २००८ मै पोर्न फिल्म खेल्न छाडेकी थिइन् । तर, उनले टेराभर्सन नामक कम्पनी स्थापना गरेर आजकल पोर्न फिल्म निर्माणमा लागेकी छिन् ।
अमेरिकन पोर्न स्टार पिटर नर्थसँग १० मिलियन डलर सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । १ हजार ८ सयभन्दा धेरै पोर्न फिल्ममा काम गरिसकेका नर्थले ७० भन्दा बढी पोर्न फिल्मको निर्देशनसमेत गरेका छन् । यसका अलावा उनले पोर्न फिल्म निर्माण गर्ने आफ्नै कम्पनी नर्थस्टार पनि सञ्चालन गरेका छन् ।
अमेरिकन पोर्न स्टार जेसी जेनीसँग ८ मिलियन डलर सम्पती रहेको छ । जेसीले ७५ वटाभन्दा बढी पोर्न फिल्ममा काम गरेर सो सम्पत्ति जोडेकी हुन् । पोर्न उद्योगबाट अवकाश लिइसकेकी जेसी पोर्न फिल्मकी सर्वाधिक सफल कलाकारमध्येमा पर्छिन् । उनले पोर्न फिल्मबाट सम्पत्तिमात्र होइन सयौं अवार्डपनि पाएकी छिन् ।
अमेरिकन पोर्न स्टार ट्रेसी लर्ड्स ७ मिलियन सम्पत्तिकी मालिक हुन् । तर ट्रेसीको सम्पत्तीको स्रोत पोर्न फिल्ममात्र होइन । उनी गायीका तथा लेखिका पनि हुन् । उनले १ सयभन्दा बढी पोर्न फिल्ममा काम गरेकी छिन् ।
Previous Previous post: युरोकप : शाकिरी चम्किएपछि स्विट्जरल्यान्डको पहिलो जित
Next Next post: युरोकपमा आज समूह चरणका ४ खेल हुँदै
ज्योती मगर र रितिका कुँवरको तीज बिशेष गीत “मितीनी” सार्वजनिक (भिडियोसहित)
पोर्न केसको ‘सुटिङमा कैयौं मानिसहरुले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखे’
यी हुन् ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को ग्राण्ड फिनालेमा पुग्ने टप ४ प्रतिस्पर्धी
प्रियङ्का कार्की: गर्भवती हुँदाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दा…..?
यम बरालको ‘हलचल जिन्दगी’ सार्वजनिक (भिडियो)
यी व्यक्तिका लागि आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् रेखाले
को बन्ला चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष ?
अभिनेता सुशान्तकी पूर्व म्यानेजर सलियानको मृत्यु भएको ६ दिनमै सुशान्तले पनि गरे देहत्याग
सुशान्तको अन्तिम फिल्म दिल बेचाराको भावुक ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा परेर फाल्ने कल्पनाको ‘सरि ल’ भिडियो !